Tuubbada Naxaasta ee Brazing oo leh Nidaamka Indha-indheynta Induction
Bogga ugu weyn / Codsiyada / Dhaqdhaqaaqa wax-qabadka / Tuubbada Naxaasta ee Brazing oo leh Induction
Tuubbada Naxaasta ee Brazing oo leh Induction
Category: Dhaqdhaqaaqa wax-qabadka Tags: naxaas leh, tuubooyin naxaas leh, tuubbo naxaas ah, tubbada xarkaha, soo iibso kululeeyaha naxaasta, Soo iibso kuleyliyaha kuleylka kuleylka, iibso brazer brazer, tuhun galinta tuubbooyinka naxaas ah, tuubbooyinka cawska induction, dhuumaha xarkaha induction, tuubada la riixidda tuubbada, Qiimaha brazer copper induction
Tilmaamaha tuhun galinta tuubbooyinka naxaas ah iyo waqtiga curyaaminta adoo adeegsanaya nidaamka DW-UHF-10 kW iyo isku-xidhka shaybaarka kala qaybsan ee la heli karo
DW-UHF-10KW mashiinka adag ee garaaca
• tubbada naxaaska ah - Tuubada Wejiga
• Koollo koollo ah
Awooda: 10 kW
Heerkul: Ku dhawaad ​​1500 ° F (815 ° C)
Waqtiga: 5 - 5.2 sek
Maaddaama hal shir la siiyay oo keliya baaritaanka, waxaan u diyaarinnay culeyska tijaabada annaga oo adeegsaneyno derbi culus 5/16 ”tuubbooyinka naxaasta ah oo ay ka mid yihiin hal tuubbo ayaa aqbalay kan kale dhammaadka gubashada furan. Waqtiga kuleylka waxaa lagu qiyaasey iyadoo la isticmaalayo rinjiga tempilaque si loo muujiyo heerkulka. Golaha tijaabada, (oo ay la socdaan qaybaha la bixiyay) ayaa la isu keenay iyagoo leh dabool 505 bir ah oo koollo ah laguna dhejiyay xargaha tijaabada shaybaarka sawirrada ku lifaaqan) Kuleylka kuleylka 5 - 5.2 ilbiriqsi ayaa la helay inuu qulqulo alwaaxda isla markaana sameeyo isku-darka .
Sida la muujiyey, qaabka DW-UHF Nidaamka xoog u isticmaalidda wuxuu awood u leeyahay inuu kululeeyo tuubbada ugu weyn iyo tan ugu yar labadaba qaybaha tuubbada si loo dhammaystiro wadajirka xarkaha. Waqtiyada kuleylka adoo adeegsanaya gariiradda tijaabada ah ee la heli karo waxay ku jiraan waxsoosaarka waqtiga kuleylka waxsoosaarka ee ay u baahan tahay Electrolux.
HLQ waxay ubaahantahay isu imaatin buuxa si dib loogu eego si loo horumariyo naqshadeynta gariiradda ugu dambeysa ee qaadi kara dhammaan 12-ka isku-xirnaanta ee lagu muujiyay sawirkaaga qaabeynta. Waa lagama maarmaan in la ogaado lana arko nadiifinta udhaxeysa isku xirnaanta tuubada si loo xakameeyo iyo qeybta kombaresarada birta si loo hubiyo in guryaha birta ah aysan saameyn ku yeelan natiijada ka dhalata RF ee lagu abuuray xarkaha xamuulka. Naqshaddan kama dambaysta ah waxay u baahan tahay in lagu daro qalabka maaddada ferritiga ah ee gariiradda oo u adeegi doonta inay diiradda saarto qaybta RF ee maareynta naxaasta oo aysan u sii jeedin guryaha birta ah.
Imtixaannadii ugu horreeyay ayaa lagu dhammaystiray DW-UHF-10kW iyadoo la adeegsanayo shaybaarka la heli karo. Qalabka wax soo saarku wuxuu ku jiri doonaa guri aan la taaban karin oo u oggolaan doona hawlwadeenku inuu u isticmaalo si uu u helo aaladda ka soo horjeedda macdanta naxaasta ee loogu talagalay meesha kuleylka saxda ah iyo saxda ah ee habka geedi socodka Naqshadeynta gariiradda wax soo saarku waxay ku biiri doontaa raadad ka gaaban tijaabada tijaabada waana loo qaabeynayaa sida wareegyada kuleylka loo horumarin doono (waqtiyada kuleylka gaaban).